Badinwe yikhehla locansi lwesandla - Ilanga News
Home Izindaba Badinwe yikhehla locansi lwesandla
Badinwe yikhehla locansi lwesandla
Besaba ukuthi lizobamba izingane zabo ezincane lizigile
UBHODLA umlilo umphakathi waseSiyanda, ngaseLindelani, ngesenzo sekhehla elineminyaka ewu-60 ubudala eselivulelwe icala ngokuzithokozisa ngomnandi-ngingedwa phambi kwamalungu omphakathi lize lifike kuvuthondaba.
Amalungu alo mphakathi akhulume neLANGA, athi isibame emphinjeni le nto okuthiwa seku-nesikhathi yenzeka, asezamile nokulikhuza leli khehla kodwa kunhlanga zimuka nomoya.
Athi lolu daba aselubike ezindaweni eziningi, ezahlukene ezama ukuthola usizo, okubalwa amaphoyisa nekhansela lendawo.
UNkz Thulisile Dlamini, ongelinye lamalungu omphakathi akhulume neLANGA, uthi le nto isinesikhathi eside yenzeka. Uthi leli khehla, eselashonelwa ngumkalo, livele likhiphe ithuluzi lalo uma libona kudlula owesifazane eduze komuzi walo – owakhiwe eduze nomgwaqo – bese liyaqala liphulula isitho salo sangasese lisikhongozele enkomishini lize lifike kuvuthondaba.
Kwesinye isikhathi uma kudlula umuntu elimazi ngegama, uthi lize limemeze igama lakhe uma selimatasatasa lenza le migilingwane yalo.
Uthi uma lingamazi umuntu ngegama, liyamteketisa limbize ngamagama amnandi lifuna ukuba aphenduke alibuke ligila le mikhuba.
“Okusikhathaza kakhulu wukuthi le nto seliyenza ngisho kudlula izingane ezincane, sesesaba nokuthi lizoze libambe izingane zethu. Sizibona zingaphephile izingane zethu uma kusekhona leli khehla endaweni yethu. Siwumphakathi sihlanganile ngale nkinga, sanquma ukuba siyokhuluma naye emzini wakhe ukuze sithole inkinga yakhe ngale nto ayenzayo ngaphambi kokuba simthathele izinyathelo.
“Uxolisile wathi naye akazi ukuthi ungenwe yini, wathi uzozama ukuyiyeka le nto ngoba uyabona ukuthi kayilungile.
“Ucele ukuba kusale amadoda ebesihamba nawo, wathi ufuna ukukhuluma nawo abike inkinga yakhe. Asalile amadoda wawabikela ukuthi unenkinga, usezame kaningi ukuyiyeka le nto, akasazi ukuthi uzosizakala kanjani,” kusho elinye ilungu lomphakathi elikhulume neLANGA.
Kuthiwa kube yisikhathi esincane eyekile ukwenza le nto emuva kokuhlaselwa ngamalungu omphakathi emzini wakhe, kwaphinde kwasuka lokho.
Ikhansela lendawo, uNkz Mamane Xulu, lithe liyalwazi lolu daba.
“Lolu daba lwafika kimina ngomuntu owaluxoxa esehhovisi lami, kodwa ngagcina ngingayitholanga imininingwane egcwele ngalo.
“Ngiyathembisa ukuthi ngizozama ukululandela kahle uma sekudlule isiphithiphithi sokunikezela abantu ngamaphasela okudla ukuze sibone ukuthi umphakathi ungasizakala kanjani ngale nkinga ngoba isinesikhathi eside yenzeka,” kusho uNkz Xulu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uqinisekisile ukuthi udaba lwabikwa emaphoyiseni wabe esecela ukuba amalungu omphakathi axhumane nomphathisiteshi uma engenelisekile ngendlela olulandelwa ngayo.
Previous articleBashe bangqongqa abangani kugujwa usuku lokuzalwa
Next articleUbefuna ukuba ngusomabhizinisi uBobo